सञ्जीवको ब्लग: करोडौँ कस्तूरी: छुँदै छोएन
अस्तिको ब्लगको पुछारतिर करोडौँ कस्तूरीमा पनि "जाँगर चले लेख्ने नै छु" भनेर छुस्स कुरा चुहाएको थिएँ । त्यसबेला उपन्यास २५-३० पाना पढिसकेको पनि थिएँ । खासै जाँगर लाग्ने छनक नदेखेरै त्यसो भनेको हुँ । उपन्यास पढिसकेपछि भने लाग्यो उपध्रो जाँगर नभए पनि केही लेखे रमाइलै होला -अरू केही नभए पनि 'टाइमपास' त हुन्छ ।
यो ब्लग मेरो 'टाइमपास'को मेलो मात्र हो ।
दुई वर्षअघि अमर न्यौपानेको सेतो धरती पढेको थिएँ । त्यो उपन्यास लेखकले एकप्रकारको गम्भीर (melancholic?) भावमा लेखेका थिए जसले एक विधवा नारीको जीवनलाई स्थीर, उदास र मार्मिक ढङ्गमा वर्णन् गर्थ्यो । प्रस्तुतिमा पनि बहुतै अनुशासन । पात्रहरू लेखकले बोल्न दिएका वाक्य सकिनसकि बोलेजस्तो, लेखकले चाहेजस्तै गरेर सोचिदिएजस्तो । लेखाइमा सहजता देखिनँ, न त कुनै घटना वा प्रस्तुतिले बेस्कन हल्लाउन सकेको थियो ।
उपन्यास पढ्दा मलाई लागेको थियो पाठकलाई कथा सुनाउन सिपालु लेखकले कथाबाट सफासँग केही भन्नचाहिँ सकेका रहेनछन् । त्यो उपन्यासमा अमर न्यौपानेले कुनै गहन सन्देश बोक्न खोजेका भए पनि आफ्ना अञ्जुलीमा बोकेको त्यो सन्देश उपन्यास सकिने बेलासम्म आइपुग्दा बाटैमा थोपाथोपा गरि पोखिसकेको जस्तो लाग्थ्यो ।
कहिले एउटी विधवा महिलाको संघर्षको कारुणिक कथा र कहिले वैधव्य र निष्ठाको अतिप्रशंसाको भूमरीमा परेर लेखकले सेतो धरतीमा देखाउन खोजेको कुरा कतै बीचमै हराएको थियो ।
कृतिको सन्देश (शिक्षा भन्न खोजेको होइन) पाठकले आफैँ निचोरेर बुझ्ने हो । एउटा कृतिको बुझाइ पाठकपिच्छे फरक हुनसक्छ । सेतो धरतीलाई राम्ररी बुझ्न नसक्नुमा पाठकका रूपमा मेरो पनि कमजोरी रह्यो होला । तर, अमर न्यौपानेको लेखाइमा ठोस दिशा र दृष्टिकोण पाउन सकेको थिइनँ । त्यो उपन्यास पढेर म उनको 'फ्यान' हुन सकिनँ ।
अहिले सेतो धरतीको कुरा भइरहेको छैन । म बरालिएँ ।
अमरको नयाँ उपन्यास करोडौँ कस्तूरी बजारमा आएपछि किन्न परिहाल्यो । मलाई मन परे पनि नपरे पनि अमर नयाँ पुस्ताका सबल र सफल लेखक नै मानिन्छन् । मदन पुरस्कार विजेता । उनलाई मजस्ता 'कन्फ्युज्ड' केही पाठक नभए पनि हुन्छ, तर उनको कृतिका बारेमा म कसरि अनभिज्ञ रहन सक्छु ?!
उपन्यास किनियो र पढ्न बसियो –तर पढ्न भने निकै उकालो पर्यो ।
'छायाँ कथा' भनेको के हो थाहा थिएन । पहिलो पटक करोडौँ कस्तूरी पढेर नै थाहा पाएको हो । आत्मकथाको शैलीमा लेखिएको यो उपन्यास कलाकार हरिवंश आचार्यको जीवनीमा कुनै हिसाबमा आधारित आख्यान रहेछ -उनलाई 'पात्र-बिम्ब' बनाएर लेखिएको ।
उपन्यासको ढाडमा छापिएको सन्देशबाहेक अमरको उपन्यासलाई हरिवंशले कसरि लिए त्यो उनै जानुन् । भरखरै उनको आत्मकथा 'चिना हराएको मान्छे' पढेको भएर पनि होला मलाई भने उपन्यासको विषयवस्तु छनौट नविन लागेन -भलै करोडौँ कस्तूरीको कथा हरिवंशको आत्मवृत्तान्तभन्दा पृथक छ ।
अब उपन्यासभित्र छिरौँ ।
यसप्रकारका अभिव्यक्ति र वर्णन् सहज र स्वभाविक लाग्दैनन् । लगभग पाइलैपिच्छे आउने यस्ता अभिव्यक्तिका कारण करोडौँ कस्तूरी स्कूले विद्यार्थीले लेख्ने सामान्यस्तरको कथालेखन जस्तो लाग्छ ।यसका अतिरिक्त त्यो निश्चित समय र परिवेषका पात्रले क्यारिकेचर, सपथ, हर्कत आदि शब्द फटाफट प्रयोग गरेको, लुगामा 'पर्फ्युम' छर्केको, हाकिमसँगको रिसले रक्सी पिएको आदि प्रसङ्ग सुहाउँदो लाग्दैन । सुँगुर, गैँडा आदि जनावरको आवाज निकालेर गाउँलेलाई तर्साएको प्रसङ्गमा पनि लेखकले स्वभाविकतामा ध्यान पुर्याउन नसकेको देखिन्छ ।
करोडौँ कस्तूरीमा मूल पात्रका सयौँ उट्पटाङ्ग अटाएका छन् । उसले पाएका सयौँ गाली र पिटाइ अटाएका छन् । जीवन-जगतका विषयमा लम्बेतान गन्थने परिभाषा अटाएका छन् । तर, दैनिक जीवनका सामान्य र सहज घटना अटाएका छैनन् । उदाहरणका लागि उपन्यासमा हरिका दिदी र बहिनीको विवाह भएको छ तर पाठकले यसको सुइँको पछिमात्र पाउँछन् । आफूले हेरेको भन्दा अर्कै केटीसँग हरिको विवाह भएको भनिएको छ । तर, यथेष्ट वा स्वभाविक वर्णनबिना कथाको सिलसिला मिलाउन जबरदस्ती छुस्स चुहाइएको यो प्रसङ्गले दाँतमा ढुङ्गा लागेजस्तो हुन्छ ।
त्यसैगरि, पूराण वाचन गर्न गाउँमा आएको आफ्नो पूरानो साथी रामहरि (वासुदेव)का कारण हरिले अन्तमा आफ्नो गुमेको आत्मसम्मान फिर्ता पायो भनिएको छ । तर, यो प्रसङ्गलाई लेखकले यति हतारमा टुङ्ग्याएका छन् कि समग्र प्रसङ्ग बिल्कुल अवास्तविक र 'फिल्मी' लाग्छ ।
कथाकार, उपन्यासकारले पीडा र विरहको पाटोलाई मात्र जोड दिएर पाठकलाई दु:खको भूमरीमा ठेल्नखोज्ने प्रवृत्ति समकालिन साहित्यमा हावी हुँदै गएको छ । मलाई भने यो 'परपिडक' प्रवृत्ति कति पनि मन पर्दैन । सुख सामान्य मानिसको जीवनको एक स्वभाविक र अभिन्न अङ्ग हो । जस्तोसुकै दु:खी वा गरीब भनिएको मानिस पनि २४ घण्टा रोएर, उदास भएर बस्दैन । हरेक व्यक्तिको जीवनमा पनि आनन्द र खुशीका सानातिना स्रोत हुन्छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि लेखकले यसलाई देख्न नचाहालान्, तर पीडाको एकोहोरो वर्णनले आख्यानलाई जीवन्त बनाउँदैन ।
उपन्यास पढ्दा मलाई यस्तो लाग्यो त्यो गाउँमा हरिको परिवार र समग्र गाउँले २४ घण्टा र ३६५ दिन भविष्य बनाउनमा मात्र दत्तचित्त रहेछन् । वर्तमानमा बाँच्दा रहेनछन् । चाडपर्व, मेलापात, विवाह र भोजभतेरमा रम्दा रहेनछन् । गाउँदा रहेनछन्, नाच्दा रहेनछन् । हाँस्दा रहेनछन् ।
मेरो गन्थन सकियो ।
यो टिप्पणी लेख्नुको उद्देश्य लेखक र प्रकाशकलाई निरुत्साहित गर्नु होइन -न त उनिहरूलाई मेरो ब्लगका कमेन्ट पढिबस्ने फुर्सद नै होला । मैले माथि नै भनिसकेँ यो मेरो 'टाइमपास'को मेलो मात्र हो । करोडौँ कस्तूरीले राम्रो बजार पाइ नै सकेको छ र यसमा पाठकको चासो निरन्तर हुने निश्चित छ । मेरो कमेन्ट समकालिन साहित्यसँगको आफ्नो चासोलाई निरन्तरता दिने सानो प्रयास मात्र हो ।
म सिद्धान्तत: बजारको पक्षपाती हुँ । साहित्यले पनि बजार पाउनुपर्छ । लेखक, साहित्यकारले आफ्नो कृतिबाट मान मात्र होइन, दाम पनि कमाउनु पर्छ । तर, बजार र साहित्यको स्तरकाबीचमा केही सन्तुलन भने अवश्य चाहिन्छ –अरू बस्तु जस्तै । यो सन्तुलन कायम गर्नमा को-को जिम्मेवार छन् –लेखक स्वयं, प्रकाशक, समालोचक वा मजस्ता सामान्य पाठक ?!
शायद सबै । धन्यवाद ।
Posted by Sanjeev at 11:53 AM